စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce Journal
Home » -Cover_Story » စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » အထွေထွေ
Fri, 06/19/2020 - 11:07 -- journal_editor
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် သည် ဇွန် ၈ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို လက်ခံ တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာ-တရုတ် သံတမန်ဆက်ဆံမှု နှစ်(၇၀) ပြည့် မြောက်ပြီဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် လူမှုစီးပွား ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အထူးဝမ်းမြောက်ပါ ကြောင်း၊ COVID- 19 ကာလအတွင်း ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးတို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ မှ လှူဒါန်းမှုများအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ဗဟိုအဆင့်သာမက အောက် ခြေအဆင့်တွင် လည်းကောင်း၊ ကုန်သည်များ အချင်းချင်းလည်းကောင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံမှ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို အားရ ဖွယ်တွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊ မူဆယ်နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်စည်ကန့်သတ် စစ်ဆေးမှုများကြောင့် ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့၍ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသဖြင့် အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းနှင့် သစ်သီးဝလံများအတွက် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းများကိုလည်း အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)မှထွက်ရှိသည့် ပြောင်းစေ့များ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားဆောင် ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ဝဥ၊ လျှော်ဖြူ၊ ထောပတ် သီး စသည့် ပို့ကုန်အမယ်သစ်များအား တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ တင်ပို့ရာတွင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများ ကိုလည်း ဖြေလျှော့ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတွင် နှစ်ဖက်ကုန်သည်များအကြား ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါကြောင်း၊ မူဆယ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေးအတွက် လမ်းပိုင်းချဲ့ထွင်ရာတွင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုအပြင် နယ်စပ် နေပြည်သူများအကြား နယ်စပ်ထွက်ကုန်များ အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများကိုလည်း အဆင်ပြေ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်စည်ပြပွဲများ အပြန်အလှန် ပုံမှန် ကျင်းပနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai က ပြန် လည်ဆွေးနွေးရာတွင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိန်း ဂဏန်းများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ မှုပမာဏမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်လာခဲ့ပါ ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ဆက်လက်တိုးတက်စေရေးအတွက် မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်မှ ရွှေလီအထိ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွင် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ရေးအတွက် ကုန်စည် များမပါရှိဘဲ ရပ်နားထားသည့်ယာဉ်များအား ရှင်း လင်းပြီး ကုန်တင်ယာဉ်များကို ဦးစားပေးစေလို ပါကြောင်း၊ ရွှေလီ-မူဆယ်ဂိတ်တွင် လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအတွက် ည ၁၀ နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း၊ မန်းမန်-နွမ်းရင် နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ကုန်စည်များစစ် ဆေးရန်အတွက် အဆောက်အအုံ လိုအပ်လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ယာဉ်မောင်းများအား ကျန်းမာရေးထောက်ခံစာ (Health Certificate) ပြသနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် မူဆယ်-မန္တလေး ရထားလမ်းကိုလည်း အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရေး မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဇုန် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ မြန်မာဘက်မှ ဒုတိယ ဝန်ကြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံပြီး နောက်ပိုင်း မူဆယ်(၁၀၅)မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်နှင့် တစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံတို့ ကုန်သွယ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယာဉ်မောင်းဦးရေ တိုးမြှင့် ခြင်းနှင့် ဝင်/ထွက်ချိန်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကာ ယခင် ယာဉ်မောင်း ၂၀ ဦးရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ၁၇ ဦး၊ ၁၈ ဦးသာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ၁၃ ဦးထိ လျော့ကျသွားသည့် အခြေအနေထိရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန် ၁၀ ရက် နောက်ပိုင်းတွင်၂၇ ဦးထိ ထပ်မံဖြည့် တင်းပေးထားပြီး ၃၀ ဦးထိ ဖြည့်တင်းပေးရန်စီစဉ် လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခင်က မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီခွဲထိသာ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ည ၁၀ နာရီအထိ ဝင်/ထွက်ချိန်များ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။